Date My Pet » 5 Things ankizivavy ve Taorian'ny hoavy?
Last nohavaozina: Sep. 17 2020 | 2 min namaky
Fa ndao hatrehina izany, handika-dehibe dia mafy. Tsy maninona izay nanomboka izany, ireo herinandro vitsivitsy voalohany ho toa indrindra tamin'ny. Raha, farany, isika rehetra mba hahita hifindra fitiavana hafa, misy zavatra vitsivitsy ny zazavavy rehetra manao araka fandravana ny. Vitsivitsy no voalaza eto ambany:
1. Fitarainan'ny – be
Na ny reminiscing nandritra ny fahatsiarovana, fanomezana, hira, na ny kisendrasendra fipoahan'ny ny fihetseham-po, ho azo antoka fa hitranga nitomany. Ho tezitra sy mampiseho fihetseham-po no dingana voalohany eo amin'ny lahatsoratra fanasitranana fiatoana-ny dingana.
2. Facebook bary ny taloha
Noho ny fielezan'ny haino aman-jery sosialy, izany angamba no tena manimba zavatra mazava sy ankizivavy manao araka ny fiatoana-ny. Na dia rehefa une-friending, ankizivavy tsy afaka ny tsy nitendry amin'ny anaran'i azy ho any amin'ny fikarohana taloha bara hidiny sy tsy tapaka izy sy ny zava-drehetra stalk sary, pejy, sy ny toerana tiany izy na naneho hevitra momba.
3. Mijanona fiharatana
Raha mitranga izany ho fanohanana ny vehivavy eo amin'ny angst ho tezitra amin'ny olona. Izany koa dia vokatry ny zava-misy rehetra ao am-po zazavavy fiatoana kely amin'ny endrika tsy mamela hery. Bebe Kokoa, raha vao tsy manambady tsy misy ny volana sy ny ankizivavy tsy afaka hikarakara raha toa ka ny ranjony dia voaharatra na tsia.
4. Mandeha amin'ny alalan'ny “floozy” sehatra
Dingana ity dia miankina amin'ny ankizivavy ny ankizivavy, ary ihany koa dia miankina amin'ny fomba naharitra ela ny fifandraisana. Nefa azo antoka ny milaza fa na inona na inona, zazavavy rehetra mandeha amin'ny alalan'ny dingana ity amin'ny fomba na hafa. Na dia manana olona iray be loatra zava-pisotro, Hafatra Vetaveta, na mahazo namana amin'ny maro ry zalahy.
5. Reinvents ny tenany amin'ny alalan'ny-tena nahitana sy manandrana zava-baovao
Avy amin'ny boky fampianaran-tena ho mitaona fanahy ny filma sy boky ho ny yoga, zazavavy rehetra miezaka ny reinvent ny tenany. Fampiononana izany dia zava-dehibe eo amin'ny fiatoana-ny tsingerin'ny toy ny tsy manampy ny fandraisantsika ny alahelo fa mba ho mazava fotoana izay ankizivavy “hahita” ny tenany.
Raha maharary ny fitiavana, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny fitiavana ihany koa no mahatonga anao mafy.
10 Didy mampiaraka Ho an'ny Vehivavy
5 Zavatra mba handresena ny fifandraisana Communication ireo sakana
6 Manan-danja Fanontaniana mila eritreretinao talohan'ny asitrika ao amin'ny Dating Pool